Wakiilka Sare ee Canada ee Jamaica oo Booqday Wasiirka Dalxiiska
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jamaica News Breaking » Wakiilka Sare ee Canada ee Jamaica oo Booqday Wasiirka Dalxiiska
Wicitaan xushmad leh Jamaica
Wasiirka Dalxiiska Jamaica, Mudane. Edmund Bartlett, oo sawirka midigta ka muuqda, wuxuu ku biirayaa Wakiilka Sare ee Kanada u fadhiya Jamaica, Marwo Emina Tudakovic (dhexda) iyo Xoghayaha Joogtada ah ee Wasaaradda Dalxiiska, Jennifer Griffith, markay joojiyaan muraayadaha indhaha Wacitaanka Wakiilka Sare ee xafiisyada New Kingston ee Wasaaradda.
Miiska dooddu waxay ahayd siyaabaha ay Jamaica iyo Kanada u sii wadi karaan iskaashiga dhinacyada sida dalxiiska.
Qeybta dalxiiska ayaa siisa matoor koritaan dhaqaalaha Jamaica.
Waxaa loo baahan yahay iskaashi ay ka go'an tahay qaybaha dawladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay si loo gaaro bartilmaameedyo cayiman, oo udub dhexaad u ah qorshayaasha Wasaaradda Dalxiiska.
Waxay ku hawlan yihiin dood ballaaran oo ku saabsan isbeddelada warshadaha safarka ka dib masiibada COVID-19, iyo sidoo kale siyaabaha ay Jamaica iyo Kanada u sii wadi karaan iskaashiga meelaha sida dalxiiska.
The Jamaica Wasaaradda Dalxiiska iyo hay'adaheeda waxay ku jiraan hawl si kor loogu qaado loona beddelo wax soo saarka dalxiiska Jamaica, iyadoo la hubinayo in faa'iidooyinka ka soo baxa waaxda dalxiiska loo kordhiyo dhammaan dadka reer Jamaica. Si taas loo gaaro waxay hirgelisay siyaasado iyo istiraatiijiyado siin doona dardar dheeraad ah dalxiiska oo ah mishiinka koritaanka dhaqaalaha Jamaica. Wasaaraddu waxay weli ka go'an tahay inay hubiso in waaxda dalxiisku ay kaalin buuxda ka geysato horumarinta dhaqaalaha Jamaica iyadoo la fiirinayo awooddeeda wax -soo -saarka ee baaxadda leh.